के हाम्रो नियत सहि छ ? | himalayakhabar.com
के हाम्रो नियत सहि छ ?
19th Apr 2020, Sunday | २०७७ बैशाख ७, आईतवार १२:०७
जता ततै कोरोनाको महामारी छ । मान्छेहरु यस्तो कठिन घडिमा कसरी बाच्ने भनेर सोच्दै छन् । आपत बिपतमा के गर्ने भनेर आतिनु सामान्य कुरा हो , अझ हाम्री जस्तो देशमा यो झनै सामान्य हुन्छ । हुने खाने त पैसाले अनेक उपाय गरेर किन्छन , नहुनेले चै के गर्छन ?
हिजोमात्र एउटा नेपाली मिडियामा भाईरल भएको भिडियो हेरें अनी मेरो मनमा अनेक प्रश्नहरु आए । मेरो देशमा नियम क़ानून भन्ने चिज पनि छर जस्तो लाग्यो । त्यो भिडियो हेर्दा यस्तो लाग्यो कि हाम्रा सरकारी सेबा दिने ब्यक्तीहरु यती अनप्रोफेशनल छन् भन्ने लाग्यो । हाम्रो स्कूलिंग त्यस्तै भएर हो कि ?
मलाई लाग्छ हाम्रो देशमा जिम्मेबारी र असल नियतको खाचो छ । हामीमा किन जन चेतना कमी भएको होला ? एउटा आमाले आफ्नो बच्चाको लागि औषधी किन्न न पाउने हो ? त्यो लाठी हान्ने प्रहरीको आफ्नो बच्चा बिरामी भयो भने उस्को श्रीमतीलाई त्यसरी नै लाठी हान्वो भने के होला ?
यो समयमा त्यो प्रहरीलाई पनि काम गर्न गाह्रो छ , म बुझ्छु । तर मनब अधिकार नभाको जस्तो गरी त्यसरी प्रहरीबाट दुर्ब्यवहार कती पनि सहनिय हुँदैन ।
बिकसित देशमा प्रहरी कडा हुन्छन् तर उनीहरुले कती सम्म कडा गर्ने भनेर उनीहरुलाई बिशेष तालिम हुन्छ । त्यो अनुसारको नियम पालना गरेन भने त्यो प्रहरीलाई पनि कडा भन्दा कडा कारबाही हुन्छ ।
हाम्रो नेपाल प्रहरी किन मौन छ ? यस्ता प्रहरीले गर्द पुरै संगठनको बदनामी हुँदा लाज लाग्दैन ?
देशमा अप्ठेरो परिस्थितिमा सबै बर्ग मिल्नु पर्नेमा उल्टै यस्ता घट्नाले समाज नै त्रसित हुने स्थिति छ । धनी त यसै धनी छन् , तर दिनभरी काम गरेर आफ्नो पेट पाल्ने गरीबहरुलाई खोई सरकारले हेरेको ? जनताले कर तिरेको पैसा खोई ? यस्तै बेलाको लागि चहिने होइन र ? कमसेकम प्रत्येक निम्न आय भएका जनताहरुलाई अलीकती भएपनि राहत स्वरूप नगद दियोभने गुजारा त चल्छ ।
देशको राजधानी काठमाडौंमा घर भाडा रकम नलिने रे , ल ठीकै छ धनी घरबेटीलाई केही भएन , तर एक पटक सोचौंत बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाको घर धनीले चै कसरी तिर्छ बैंकलाई ऋण ? बैंकको ऋण त छुट भएको छैन क्यारे , होइन कस्तो प्रकारको नियम हो यो ? नियम त सबैलाई बराबर हुन्छ होइन र ? सरकारले यो अवस्थामा बिशेष खालको सुभिधा अनि त्यो अनुसारको नियम कानुन बनाउन सक्दैन र ?
आपद विपदको यो बेला हामी सचेत र संवेदनशील दुवै हैं । आफू जोगिऔं, आफ्नालाई जोगाउँ । सबैले एक अर्कालाई सकेको सहयोग गरौं । सरकारलाई पनि राम्रो काम गर्न दबाव दिउँ ।
कोरोना भाइरसबाट एक लाख ६४ हजार बढीको मृत्यु, संक्रमितको संख्या २३ लाख ८७ हजार
२०७७ बैशाख ७, आईतवार १२:०५
काठमाडौँ । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणबाट आइतबार राति ११ः ५० बजेसम्म विश्वभर एक लाख ६४ हजार १९४ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु भएकामध्ये झण्डै दुई तिहाई ...
नेपाल अमेरिका पत्रकार द्धारा सहयोग सामाग्री बितरण
२०७७ बैशाख ७, आईतवार १४:२१